Ekpere Ikewapụ mmadụ abụọ? [Nkewa ikpeazụ]
Ekpere iji kewaa mmadu abuo a San Alejo Rapido na-emetụta ọnọdụ ndị ahụ ebe ezinụlọ anyị, nkwụsi ike nke mmụọ anyị ma ọ bụ nke ọdịmma nke ụmụ anyị ma ọ bụ nke onye ọlụlụ anyị na-emebi.
Dịka ọmụmaatụ, n'otu ọnọdụ ebe a na-achọ onye òtù ọlụlụ anyị maka omume anyị kwenyere na ọ gaghị erite uru, kama na ọ ga-emebi ya, mgbe ahụ, ahịrịokwu a bara uru.
N'okwu ndị eji ya eme ihe, ọ bụ ikewapụ onye bụbu di na nwunye ugbu a na-ezube ịnwe ike weghachite mmekọrịta anyị ma ọ bụ gbochie onye mmekọ anyị ịhapụ anyị maka onye ọzọ.
1 Ekpere nke kewara mmadụ abụọ na-ebu ọnụ na-arụ ọrụ oge niile?
1.1 Ekpere San Alejo kewara mmadu abuo
1.2 Ekpere maka ndi mmadu huru ya n'anya
1.3 Ekpere maka mmadu abuo agha ma kporo onwe ha oku
1.4 Ekpere nkewa
2 Enwere m ike ikpee ekpere ikewapụ mmadụ abụọ na onye ọ bụla?
Ekpere nke kewara mmadụ abụọ na-ebu ọnụ na-arụ ọrụ oge niile?
Ishụnanya bụ ihe dị mgbagwoju anya.
Ọ bụrụ na ịhụnanya dị n'etiti mmadụ abụọ a abụghị ezigbo, ekpere ga aru oru.
Lovehụnanya ọ bụla na-adịghị ike, n'enweghị mmetụta ma ọ bụ agụụ na-adị mfe imebi ndị a ekpere.
Ha na-ejedebe n'echiche efu, na echiche nke ịhụnanya na njikọ niile dị n'etiti mmadụ abụọ a.
Ọ bụ naanị ndị di na nwunye nwere ịhụnanya akara aka ga-adịrị ndụ.
Ma ọ bụghị ya, ị ga-enwe ike ikewapụ ndị hụrụ n'anya, ndị enyi na ndị lụrụ di na nwunye ụbọchị ole na ole.
Ekpere San Alejo kewara mmadu abuo
Gị onye nwere ngalaba nke iche.
Ihe obula na nne nke gbara nke ndi ahota, a na m ario gi ka i wepu (A na - akpọ aha onye mbu) si (Aha nke na - eso ya) Wepu, St. Alejo, rue (A na - akpọghachi aha ya).
Nke uzo ya na ndu ya ka o ghara ikwenye anyi ihe mmebi ozo. A na m arịọ gị, San Alejo, ka mụ onwe m na - ejikwa ndụ ya.
N'otu aka ahụ pụọ.
Na ha anaghị ejikọ aka ọnụ, Na ha anaghị agakọ, Ma ọ bụ na tebụl pịisiiki, Ma ọ bụ n'oche izu ike, Ma ọ bụ na ime ụlọ iji nwee ọmịiko, Ma ọ bụ n'ihe ndina iji hie ụra na-enweghị obi ụta, ịkpọasị na mkparị, na isi, ana m ajụ gị.
Na ha enweghị ike jikọta ntụkwasị obi. San Alejo, seta ha nchikota.
San Alejo nwere obi ojoo, a na m ario gi ka i nye m ihe m choro ozugbo enwere ike, ka onye m na ya bi laghachite ugbua Ka o wee laa n’ulo ya.
Ana m ekele gị maka ịnụ olu m, San Alejo atụ, ana m enyekwa okwu m iji gbasaa ekpere gị ma ọ bụrụ na ị nye m ohere ka m jikọghachi ezinụlọ anyị.
Ka nkpuru obi m na-arịọ gị ka ị kewapụ Alọtakwala ibilite na ndụ m Amen.
E nwere ọnọdụ nke anyị enweghị ike ịhụ mmadụ abụọ ọnụ, maka ihe ọ bụla kpatara ya ma anyị chọrọ ka ha kewapụ, iji nweta nke a n'enweghị nsogbu ọfụma. kpee San Alejo ekpere.
N’okwu a, ị ga-enwerịrị aha mmadụ abụọ anyị ga-achọ ikewa ebe ọ bụ na ị ga-ekwu ya n'etiti ahịrịokwu ahụ.
Ọ bụ ekpere a kapịrị ọnụ nke anaghị anabata mmadụ abụọ ahụ nọ na ya, achọghịkwa isoro ibe ha nwee oge ụfọdụ, ka ọnụnọ nke di na nwunye ahụ ghara inye gị nsogbu, yabụ na ha enweghị ọchịchọ izute ọzọ na site n'otu oge rue nke ọzọ, ha na-asọ onwe ha oyi ruo n'isi nkewa.
Ekpere a siri ezigbo ike.Ya mere, ebughị n’obi ka di na nwunye ahụ kewaa ruo oge ụfọdụ, kama ọ bụ ka nkewa ahụ doo anya.
Ekpere maka ndi mmadu huru ya n'anya
Oh, Santa Muerte abiakutere m ịrịọ gị ka o nyere m aka, enwere m ndakpọ olileanya na ndụ, enyefere m afọ ndụ m kachasị mma maka nwoke m hụrụ n'anya nke kewapụrụ n'ebe m nọ pụọ na nwanyị ọzọ na-ata ahụhụ na nwanyị ahụ na-emejọ m, Ọ chọrọ ibibi alụkwaghịm m n'ebe (aha onye ahụ) ka ọ laghachikwute m ruo mgbe ebighi ebi.
Santa Muerte, mee (aha onye ahụ) kpọọ ya asị ma tụkwasị ya obi, ghọta na ha ji ya, ihe ọ chọrọ bụ ego ya na ihe ọchị ya na ya nwere maka mmasị, m na-arịọ gị ka ikewapụ onye m hụrụ n'anya na ihe niile ihe na - ekewapu m n’ebe anya mmiri na - agba n'ihi m n'ihi onye ọzọ, wee taa ya ahụhụ.
Oh, White Girl jiri ikike gị mee ka nwanyị nke ọzọ pụọ na egwuregwu ahụ, Santa Muerte A na m arịọ gị ka ị kpọta (aha onye ahụ) n'oge a n'ihu m kpọghachite m dị umeala n'obi dị ka obere nwa atụrụ, chefuo aha nke Nwaanyị ọzọ mere m ihe eji megharịa ọnụ n'ụkwụ m rịọ mgbaghara.
Oh, Santa Muerte mere nke ahụ (aha onye ahụ) anaghị egbochi ọchịchọ m na-eme ka uche gị mee ka ị chee ọzọ banyere m na-arịọ maka ebere, nwute rịọ m ka m nwee ike inwe obi ụtọ ọzọ dịka tupu ahapụghị m naanị Santa Muerte .
Ndị hụrụ n'anya A maara ha dị ka onye nke atọ na-etinye aka na mmekọrịta kwụsiri ike ma ha bụ nsogbu dị egwu nke a ga-eji amamihe mee ihe.
Otu n’ime ụzọ ndị ahụ bụ ikpe ekpere pụrụ iche nke a ga-esi mee ebumnuche a chọrọ n’etinyeghị nsogbu.
Ekpere a ekewa mmadu abuo (ndi huru n’anya) enwetala otutu ndi n’enye ekele ekele ya.
Ozugbo i nwere echiche doro anya, gaa kpee ekpere, enwere ike ịme n'oge ọ bụla, agbanyeghị ebe ị nọ, ihe a na-atụ aro ka ejiri ya bụ nke ejiri obi eziokwu mee ya, dịka o siri bụrụ ụdị okwukwe niile.
Ekpere maka mmadu abuo agha ma kporo onwe ha oku
Saint Cyprian, gị onye kachasị ike niile, biko achọrọ m enyemaka gị, ihunanya gị, e mewo anyị ka anyị bikọtara ọnụ, a na m arịọ gị ka ọ bụrụ ihe masịrị gị pụọ na 1 ruo 2, Achọrọ m ike gị iji mee ka ndị mmadụ abụọ a kewaa.
Achọghị ịhụ, nọrọ n'akụkụ ibe gị nke ọma. A ma m na inwere ike ịchịkwa ihunanya marakwa na enwere ndị amụrụghị ibi ibi ka ibe ha, nwee obi ike na ha ekwesịghị ibikọ ọnụ, a Iụ m iyi.
Ndi di ike Senti Cyprian, I bu onye kachasi ike n’iile, a na m ario gi ka I jiri ikike gi mee ihe, ka ndi a wee kewa, ha apughi ibi n’otu, ha adighi ata ahuhu ozo, amaara m na odi ha nkpa, di na nwunye a abughi ọmụmaatụ nke obi ụtọ.
Ekpesiri m ekpere a ikewa ndi mmadu ndi n’enweghi obi uto, ama m na o nwere ike inonyere m obi uto, amakwa m na ekpere a ga-aru oru, otu a ka odi.
Anaghị anyị asọpụrụ ịkpọasị, anyị bụ ndị udo, ndị kwenyere na mkparịta ụka oge niile dịka ụzọ iji dozie nsogbu n'agbanyeghị agbanyeghị ma ha bụ.
Ugbu a, n'echiche a, a na-eji ahịrịokwu ndị a mee ebumnuche nke ike iro na ọnọdụ ndị ahụ ebe ike adịghị mma na-aga Emerụ ezi mmadụ.
Anyị bụ ike, ọ bụ ya mere anyị ga-eji na-elekọta ndị niile gbara anyị gburugburu na-emetọkwa gburugburu ebe obibi anyị.
Ọ bụrụ na ekpere a maka mmadụ abụọ ịlụ ọgụ ma kpọọ ibe anyị asị na anyị na ezi na ụlọ nọ nke ọma, ebe ike dị mma ga-enweta ike karịa n'ụlọ na-adọta azịza nke ekpere anyị.
Ana m enye ndị mmadụ okwu ndị a ...
Na ha nọ ugbu a n'uche m, nke mere na, naanị mgbe m mechara ha, iwe iwe bụ naanị na ha agaghị ebikọ ọzọ.
Ka ọgụ na mgba bụrụ akụkụ nke ndụ ha malite ugbu a gaa n'ihu,, Mgbe oge elekere ga-abata, kewapụ iche ịnakọta ọnụ.
Na ihe ha mebere ọbụbụenyi taa abụghị ihe mmụọ na-agha aghara Na ime ka ụzọ ha gaa ihu N'ụdị n'ihu ha agaghị aga izute ọzọ.
Ka ha tufuo ihe a ma obu jiri ha nke nkpuru obi ma nweta okwukwe m site n'okwukwe.
N'okwu a anyị anaghị arịọ maka ibu iro ma ọ bụ maka ezumike nwa oge.
Na ahịrịokwu a akọwapụtara nke ọma, anyị kwesịrị imeri a nkenke nkewa.
Enwere ike itinye ya n'ọtụtụ oge ma na mmekọrịta ịhụnanya ma na nke ezigbo ọbụbụenyi.
Enwere ndị, n’agbanyeghi na ha na-enye echiche nke inwe ezi ebumnobi, na -eme ka mgbe ọ bụla na-eweta oke ume ma ọ bụ ebumnuche zoro ezo na-adịghị mma ma ọlị.
N’ekpere ndị a, ekpere a bụrụ naanị ụzọ anyị ga-esi pụọ.
Enwere m ike ikpee ekpere ikewapụ mmadụ abụọ na onye ọ bụla?
Nwere ike ikpegara onye ọbụla ekpere n’enweghị oke.
Kama were kpee ekpere mgbe ọ dị mkpa. Agbalịla ikewapụ ndị di na nwunye n’enweghị ihe kpatara ya.
Ememe a siri ezigbo ike ma ekwesighi iji ya mee ihe ọ bụla.
Naanị jiri ekpere kewaa mmadụ abụọ n'ụzọ doro anya na nkewapụ onwe ha ngwa ngwa n'ọnọdụ ezigbo mkpa.